Flipboard inovandudzwa mukati nekunze mushanduro 4.0 | IPhone nhau
Kubva payakapihwa chete iyo iPad muna2010, Flipboard yakagara ichionekwa seimwe yeakanakisa mafomu, kana isiri yakanakisa, kugadzira edu edhijitari magazini zvinoenderana nezvatinoda uye / kana zvatinoda. Kubva ipapo, zvishoma nezvishoma, yanga ichiwedzera huwandu hwemabasa kuti ive chinhu chakakosha kumamirioni evashandisi. Kuuya kweApple News kwakaonekwa sekufamba kwaApple kuenda edza kuhwina pamusoro pevashandisi veichi chishandiso, asi sezvataona uye kunyangwe zvavanotaura kubva kuApple, zvishoma kana hapana zvine chekuita nekuremekedza Flipboard.
Flipboard ichangowana iyo nyowani nyowani, ichirova vhezheni 4.0 ne nhamba huru yezvinhu zvitsva Pakati payo, iyo nyowani inogadziriswazve interface inomira pachena, ichigadzira yakasarudzika nzvimbo yekuronga dzese nyaya dzinofarira kana kutifadza isu zvakanyanya.
Chii chitsva muFlipboard vhezheni 4.0
Pedzisa kugadzirisazve kweshandiso nemaitiro matsva ekuenda kumatopiki anonakidza kubva kune nyowani uye yakanaka yekudyidzana carousel.
Magazini matsva ane madimikira nezvose zvinotifadza zvakanyanya, rakapepetwa neFlipboard, uko kwatinozowana zvinyorwa kubva kuvatsikisi vakanyanya, nyanzvi dzenyaya pasina kukanganwa kubatana kwenzanga.
Huru yedu yakagadziridzwa zvekare, zvekuti izvozvi zvave nyore kwazvo kuona misoro yatinofarira, vateveri vatinavo uye nenyaya dzatakachengeta.
Imwe yemabhenefiti iyo Flipboard inotipa isu ndiyo mukana wekuwedzera edu Twitter uye Facebook maakaunzi kunakidzwa nemadziro edu neimwe nzira yakasiana neyaanenge achishandiswa pamasevhisi ese ari maviri, sarudzo yandinokurudzira iwe kana wakaneta, kunyanya yeyakajairika Facebook mushandisi interface, sezvo isu tisingakwanise kuwana kuburikidza neyechitatu-bato kunyorera senge iyo Twitter kesi.
Actualidad iPhone zvakare ine yayo magazini pane Flipboard, kana ukashinga kutitevera isu kubva panhau huru iyi yenhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Flipboard inovandudzwa mukati nekunze mushanduro 4.0